‘Playing For Change / Milalao Ho An’ny Fiovana’ Mampandroso Fihavanana sy Fampidirana Manerana Izao Tontolo Izao Amin’ny Alalan’ny Mozika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Aogositra 2016 8:08 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, русский, नेपाली, polski, Español
Mpikambana efatra ao amin'ny Tambajotran'ny Sekoly Mozika (Red de Escuelas de Musica) ao Medellin, ao Kolombià, no mandray anjara amin'ny ‘Ny Tanin'ny Fanadinoana’ (La tierra del olvido) ao amin'nyiray amin'ireo faribohitra ao Medellin. Ny lahatsary nakàna ity pikantsary ity dia afaka hita ao amin'ny kaonty YouTube-n'ny ‘Playing For Change / Milalao ho an'ny Fiovana’.
Ny tanjon'i Milalao ho an'ny Fiovàna dia ny hampiray ny vahoaka amin'ny alalan'ny mozika. Tetikasa ara-kolontsaina mampifandray ireo mpanao mozika erantany amin'ny fampiasana hira ahafantarana azy manokana.
Ho an'ny mpamorona azy, mpanatontosa sady mpamokatra sarimihetsika, Mark Johson, tany New York no tonga taminy ny hevitra :
Tokony ho 10 taona lasa izay dia nisy zava-nitranga tao NYC izay nanokatra ny masoko ho amin'ny herin'ny mozika. Teny an-dàlana handeha hiasa ho an'ny amin'ny orinasa fandraisampeo iray ao NYC aho ary teny amin'ny fiantsonan'ny fiarandalamby ambanin'ny tany raha nanatri-maso moànina roa nanao akanjo lava sy nandoko ny rehetra ho fotsy ranoiray. Ny iray tamin'ireo moànina nitendry gitara acoustic ary ny iray kosa nihira tamin'ny teny tsy azoko. Natrehako maso izany hoe tobin'ny fiarandalamby hipoka olona izany ary tsy nisy niditra tao amin'ny fiarandralamby ny olona: samy nihaino izany mozika mahafinaritra izany ny rehetra. Ny sasany tamin'izy ireo nitsiky raha ny hafa kosa nitomany fa ny rehetra dia nifandray lalina tamin'ny mozika. Niditra tao anaty fiarandalamby aho ary nitodi-doha hiasa sady niteny tamin'ny tenako fa ny mozika tsara indrindra henoko hatramin'izay dia teny amin'ny làlana ho an'ny amin'ilay orinasa fandraisampeo fa tsy tao amin'ilay orinasa. Tsapako fa ny mozika tsara sy ny kanto dia fotoana ao anatin'ny fotoana ary misy na aiza na aiza. Afaka ampiasaintsika ny hery avy amin'ireny fotoana ireny mba hampifandraisana ny olona.
Ny ezaka nataony mba hitondra olona avy amina kolotsaina , foko, fivavahana ary fiaviana ara-politika samy hafa hiaraka amin'ny alalan'ny mozika dia nanomboka nandray endrika tamin'ny Martsa 2005 niaraka tamin'izay noheverina ho anisan'ireo hira tsara indrindra tamin'ny taonjato faha-20 — ‘Stand By Me’ an'i Ben E. King. Mpihira Amerikana Roger Ridley no nihira azy io teny amin'ny làlan'ny Santa Monica ao Kalifornia, ary avy eo, nampian'i Mark feo hafa sy feo voarakitra tany Barcelona, Irlandy, Afrika Atsimo, Inde, Nepal, sy ny Afovoany Atsinanana. Tamin'ny fotoana nanoratana, efa nahazo jery mihoatra ny 90 tapitrisa ny lahatsary tao amin'ny aterineto.
Roa taona taty aoriana tamin'ny 2007, dia nanorina fikambanana iray nitondra anarana mitovy tamin'izany izy:
Ny asanay dia ny hamorona fiovàna tsara avy amin'ny mozika sy ny fianarana kanto. Tahaka ny nambaran'ny mpianatray iray ao Nepal, ” Ny Mozika dia ampahany tsy azo esorina amin'ny fiainana – tsy afa-miaina tsy misy mozika ianao.” Tsy afaky ny tsy hiombon-kevitra kokoa amin'izany isika. Ao amin'ny Fikambanana Milalao Ho an'ny Fiovana, miaina ny fiainanay manaraka an'io fitsipika io izahay ary mampihatra izany amin'ny zavatra rehetra sahaninay.
Kolombia, Meksika ary Arzantina
Nahatratra firenena maro ny hafatra mampifandray nalefan'ny fikambanana. Tamin'ny 2010, tany Kolombia i Mark mba handrakitra ny hiran'i Carlos Vives ‘La tierra del olvido’ ( Ny Tanin'ny Fanadinoana) niaraka tamin'ny fanohanan'ny Filankevitry ny Fandraharahàna ao Amerikà, izay noforonina tamin'ny 2008 mba handrisihana ny fampandrosoana ara-kolotsaina tany Amerikà.
Ho an'ny Milalao Ho an'ny Fiovana:
Io lahatsary io dia manakambana mpanao mozika 75 manerana ny firenena ao Kolombia. Nandritra ny dia nataonay dia naharay anatra izahay fa ny mozika no fitaovana tsara indrindra mba hanasitranana ireo firenena , kolontsaina sy fo rava. Miaraka amin'ity lahatsary ity no niaingànay mba hampiray hina sy hitaona ireo olona ao Kolombia mba hahafahany mandroso hiala avy amin'ireo taona maro nisy ady ka hamoronany ho avy tsara.
Ny fahombiazany dia nitondra azy ireo hanandrana indray any amina firenena hafa, ka tamin'ny 2012 dia tany Meksika ry zareo mba handrakitra ny ‘México lindo y querido’ (Meksika Tsara Tarehy sy Lalaina). Mikendry ny hanohana an'i Cauce ciudadano (Fantson'ny Olompirenena), fikambanana fiarahamonim-pirenena izay miasa miaraka amin'ny tanora mba hiady amin'ny herisetra ao amin'ny firenena.
Ny taona manaraka, tonga tao Arzentina ny Milalao Ho An'ny Fiovana mba hanohana ny hetsika fanentanana momba ny tontolo iainana antsoina hoe ‘Dejá tu huella: una Reserva con más Reservas’ (Apetrao ny Marikao: Valan-javaboahary miakara amina Valan-javaboahary Maro Fanampiny). Ny hira voafidy nantsoina hoe ‘Carnaval toda la vida’ (Karnavaly Mandramaty) avy amin'ny vondrona ska antsoina hoe Los Fabulosos Cadillacs.
Erzo Bueno, izay namokatra ny lahatsary, dia niteny:
Tena voninahitra ny fahatafidirana ho ao amin'ny fiarovana ireo ala teratany ireo. Mino izahay fa manana ny hery entina mitaona ny olona ho amin'izany antony mendrika izany.
Mbola mamorona fifandraisana any Amerika Latina ny Milalao Ho an'ny Fiovana ankehitriny. Tamin'ny 2015 niverina tany Kolombia mba hanohana ny Betsalem, fitaizana zaza kamboty amin'ny tetikasany hamorona sekoly fianarana mozika, izay antenain'izy ireo avy eo mba fakàna tahaka ho an'ny faritra hafa ao amin'ny firenena. Amin'ny 24 Septambra 2016, dia hankalaza ny Andron'ny Milalao Ho an'ny Fiovana ry zareo, izay hampiray mpanao mozika sy mpankafy mozika amin'ny alalan'ny hetsika 46 mitranga any amina firenena 21 ho fanohanana ireo tetikasa samihafa irotsahan'ny fikambanana.
Ao amin'ny kaonty Youtube-n’ny fikambanana dia ahitana dikanteny maro avy amin'ny hiran'izy ireo, avy amin'ny firenena manerana izao tontolo izao, ary koa ny fijoroana vavolombelona avy amin'ireo mpandray anjara.